Video: Wadahadalkii dhexmaray duuliyihii waday Diyaarada Erdogan & Terminaalka Garoonka Ataturki - iftineducation.com
iftineducation.com – Video: Wadahadalkii dhexmaray duuliyihii waday Diyaarada Erdogan & Terminaalka Garoonka Ataturki
Madaxweyne Erdogan ayaa intii uu socday Inqilaabkii dhicisoobay, waxa uu ku sugnaa magaalada loo dalxiis tago ee Marmaris.
Daqiiqado kahor inta uusan bilaaban af-gambiga, ayaa Madaxweyne Erdogan waxaa lagu war galiyay inuu kusoo fool leeyahay af-gambi xoogan naftiisana qatar kujirto,
waxaana mid kamid ah saraakiisha Milatariga uu ku war galiyay inuu si degdeg ah uga tago halka uu kusugnaa islamarkaasina uu qabto dhanka magaalada Stanbul.
Madaxweyne Erdogan, ayaa si degdeg ah ugu soo duulay magaalada Stanbul, waxaana intii uu hawada kusoo jiray uu la kulmay caqabad kaga timid qaar kamid ah Diyaaradaha dagaalka oo ay wateen saraakiisha afgambiga waday, hadana sidaas ooy tahay Madaxweynaha ayaa safarkiisa sii watay waxaana uu si nabad ah uga dagay garoonka Ataturki oo ay markaas ku sugnaayeen ciidamo farabadan oo kuwa inqilaabka waday ah iyo shacab isaga taageersan.
2 kamid ah Diyaaradaha f-16 oo markaas hawada kujiray ayaa raadaarkooda si cad u arkayay Diyaarada Madaxweynaha, hadana wax rasaas ah kuma furin iyadoo amarka ay haysteen uu kamid ahaa ineey dilaan Madaxweynaha.
Duuliyaha waday Diyaarada Erdogan oo lasoo hadlay Terminalka Ataturki, ayaa u sheegay inuu wado diyaarad shacab islamarkaasina uu doonayo inuu soo caga dhigto.
Hadaba halkaan ka daawo wadahadalkii dhexmaray Duuliyihii waday Diyaarada Erdogan iyo Terminalka Garoonka Ataturki.
Turkiga: In ka badan15,000 oo shaqada laga joojiyay